MasterCard's CFO: Cryptocurrency boosting fividianana ireo mpanjifa ny fandaniana - Blockchain News
Mastercard dia nahita ny fitomboan'ny fampiasana amin'ny ampahany noho ny mpampiasa mividy cryptocurrency.
Ny fandoavam-bola tambajotra miampita sisintany boky – ny ohatry ny fandaniana mpanjifa any ivelany – efa nitsangana 22 isan-jato tamin'ity taona ity hatramin'izao, nahatonga amin'ny ampahany ny mpanjifa mampiasa ny karatra hividy nomerika vola, hoy Lehiben'ny Financial Mpiandraikitra Martina Hund-Mejean tamin'ny Alakamisy. Higher fandaniana ny mandeha any Eoropa ihany koa ny nandray anjara, hoy izy.
"Fotsiny mba ho mazava, tsy hitoetra cryptocurrency mifamadika na varotra ny ny tambajotra,"Hund-Mejean nilaza tamin'ny antso amin'ny mpandalina. "Ny fikasany dia tsy sahy karazana asa ity dia foana rehefa tsy manana tsipika ny imasonay dia tahaka ny ahoana no hijery cardholders cryptocurrencies amin'ny ho avy."
Previous Post:Vokatry ny ASIC poti avy Samsung
Next Post:UPS raki-daza patanty hanaiky Bitcoin for fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana